Editorial Dykinson - World Book
Dykinson Publishing House
Ny maha-azo itokiana ny hetran'ny fidiram-bolan'ny tena manokana ao amin'ny vondrom-piarahamonina mizaka tena amin'ny fitondrana iombonana
Febroary 2, 2022 ny Pallares Rodriguez, Rosario
Aiza no hividianana ny boky The subjectivity of the Income Tax of Physical Persons in the Autonomous Communities of the Common Regime of Pallarés Rodríguez, Rosario? Inona no dikan'ny boky The subjectivity of the Income Tax of Physical Persons in the Autonomous Communities of the Common Regime? . Bebe kokoa momba ny boky The... hamaky bebe kokoa
Sokajy boky Tags Dykinson Publishing House Leave a comment
Fifaninanana tsy ara-drariny amin'ny asa fitaka sy fakana tahaka
Janoary 22, 2022 ny Echegaray Daleccio, Fernando Juan
Aiza no hividianana ny boky Fifaninanana tsy ara-drariny ho an'ny asa fitaka sy fakana tahaka? Momba ny inona ilay boky Fifaninanana tsy ara-drariny amin'ny asa fitaka sy fakana tahaka? Ity publication ity dia mampiseho: (i) ny maha-maika ny hamoahana lalàna vaovao (lege fenda) momba ny fifaninanana tsy ara-drariny ho an'i Porto Rico noho ny fitsipika tranainy sy tsy ampy nanan-kery tamin'ny fotoana… hamaky bebe kokoa
Famakafakana sy fiantraikan'ny zo ara-tsosialy
Janoary 20, 2022 ny Garrido Gomez, Maria Isabel
Aiza no ahitana ny boky Fanadihadiana sy ny fiantraikan'ny zo ara-tsosialy nosoratan'i Garrido Gómez, María Isabel? Inona no dikan'ny boky Fanadihadiana sy ny fiantraikan'ny zo ara-tsosialy? Ny boky Fanadihadiana sy ny fiantraikan'ny zo ara-tsosialy dia mikendry ny handalina io karazana zo io, mankasitraka ny fatiantoka lehibe amin'ny fotoana maro, izay midika fa ... hamaky bebe kokoa
Ady ara-piaraha-monina sy ara-poko
Desambra 10, 2021 ny Eguiguren Riofrio, Maria Beatriz
Aiza no ahitana ny boky Socio-environmental and interethnic conflicts nosoratan'i Eguiguren Riofrío, María Beatriz? Momba ny inona ilay boky Socio-environmental and interethnic conflicts? Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, niaina fiovana isan-karazany i Ekoatera, izay manova tsy tapaka ny sehatra ara-tsosialy (toe-karena, politika ary kolontsaina) ary ny tontolo iainana, anton-javatra izay iharan'ny hery ivelany ihany koa amin'ny… hamaky bebe kokoa
Fananan-tsaina sy fanavaozana mifototra amin'ny angona
Desambra 5, 2021 ny Lopez-Tarruella Martinez, Aurelio
Aiza no hividianana ny boky Intellectual property and innovation mifototra amin'ny angon'i López-Tarruella Martínez, Aurelio? Inona no dikan'ny boky Fananan'ny Intellectual Property and Data-Driven Innovation? Ny angon-drakitra dia lasa fananana tsy azo tsapain-tanana vaovao manana sanda lehibe ho an'ny fikambanam-panjakana sy tsy miankina izay ahafahan'izy ireo manatsara na manolotra… hamaky bebe kokoa
E-fahasalamana, fahaleovan-tena ary angona klinika
Novambra 27, 2021 ny Gil Membrado, Cristina
Aiza no ahitana ny boky E-fahasalamana, fahaleovan-tena ary angona klinika nataon'i Gil Membrado, Cristina? Inona no atao hoe boky E-fahasalamana, fahaleovantena ary angona klinika? Ny revolisiona nomerika amin'ny fahasalamana sy ny fandrosoana vaovao amin'ny siansa ara-pitsaboana dia miteraka fanamby lehibe ho an'ny Lalàna. Miatrika fiovan'ny paradigma isika izay misy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitry ny… hamaky bebe kokoa
Porofo miampita sisintany sy ny fahombiazan'ny fomba fiasa ao amin'ny Vondrona Eoropeana
Novambra 12, 2021 ny Perez Romero, Jose Manuel
Aiza no hividianana ilay boky porofo miampita sisintany sy ny fahombiazan'ny fomba fiasa ao amin'ny Vondrona Eoropeana? Inona no atao hoe porofo miampita sisintany sy ny fahombiazan'ny fomba fiasa ao amin'ny Vondrona Eoropeana? Tafiditra ao anatin’ity asa ity ny famakafakana lalina ny zava-misy mikasika ny filazana fa mivezivezy malalaka ny porofo eo anivon’ny sendikà... hamaky bebe kokoa
Eo anelanelan'ny copla sy Flamenco (s). Seho, fifanakalozan-kevitra ary fifanakalozana
Novambra 9, 2021 ny ENCAHO, ENRIQUE
Aiza no hividianana ny boky Entre copla y Flamenco(s). Seho, fifanakalozan-kevitra ary fifanakalozana? Inona no atao hoe boky Entre copla y Flamenco(s)? Seho, fifanakalozan-kevitra ary fifanakalozana? Nandritra ny tantaran'izy ireo, ny copla sy ny flamenco dia nandalo sehatra iraisana, tamin'ny alàlan'ny mpilalao izay nanolotra tsy an-kiato ny karazana iray na hafa tao amin'ny repertoire-ny, ary tamin'ny… hamaky bebe kokoa
Pedagogie de la virtue: manabe sy manabe tena amin'ny fahatsarana
Novambra 1, 2021 ny Oronoz, Soraya
Aiza no ahitana ny boky Pédagogie des virtue : fitaizana sy fitaizana ny tena amin’ny fahatsarana ? Inona no atao hoe Pedagogie de l'Eau de l'Eau : fitaizana sy fitaizana ny tena amin'ny fahalavorariana ? Pedagogy momba ny hatsaran-toetra: ny fitaizana ny tena sy ny fitaizana ny tena ho amin'ny fahatsarana dia asa natokana ho an'ireo olona rehetra izay, amin'ny lafiny iray na amin'ny lafiny hafa, mitaona… hamaky bebe kokoa
Ny maha-tantara an'i Paul Ricoeur
Septambra 29, 2021 ny Quiceno Osorio, Juan David
Aiza no hividianana ny compendium Narrative identity araka an'i Paul Ricoeur nataon'i Quiceno Osorio, Juan David? Avy amin'ny fifampiraharahana inona ny compendium The narrative identity araka an'i Paul Ricoeur? Ny olona rehetra dia tafintohina mandrakariva amin'ny fanontaniana hoe: Iza moa aho? Misy mihevitra fa afaka mahita ny valiny ao amin'ny tantaran'ny lasa, ny hafa amin'ny fitarihan'ny... hamaky bebe kokoa